नेपाल आज | कम्युनिष्ट सरकारले विदेश सम्बन्ध ध्वस्त बनायो (भिडियोसहित)
कम्युनिष्ट सरकारले विदेश सम्बन्ध ध्वस्त बनायो (भिडियोसहित)
शनिबार, ३० कार्तिक २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
"Talking to Everybody is talking to nobody "
संचार अभियन्ता एवम विश्लेषक गोपाल झा भन्छन्– नेपालको विदेश सम्बन्ध र छिमेकीसंगको सीमा विवादबारे बहस चर्किएका बेला कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा विश्लेषक झाको यो वाक्य नै काफी छ । कुनै खास मुद्दामा कुनै खास देशसंग ठोस कुरा गर्न छोडेर अनावश्यक विषयमा जो भेट्यो, उसैसंग नानाथरी कुरा गर्नु नै विवादको जननी हो ।
अहिले नेपालमा भएको यही हो । आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीनसंग भएको मनमुटाव अन्त्य गरी अघि बढ्न कुनै गृहकार्य छैन । ठीक उल्टो भेनेजुएला, क्युवामाथि अन्याय भयो भनेर दुई हात उफ्रेर बोल्छन् । साइनो नभएको उत्तर कोरियाको लगातार निस्फिक्री भ्रमण गरिरहन्छन् । अजरबैजान गएर लुकेर भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई भेट्छन् । तर, वर्षौदेखिको छिमेकीसंगको सीमा विवाद हल गर्न कुनै प्रयास गर्दैनन् । बरु ठीक उल्टो भ्रातृ संगठन उतारेर आफना छिमेकी मित्रको पुत्ला दहन गर्न उक्साउँछन् ।
नेपालको छिमेकी मुलुकसंगको सीमा विवाद तनावले होइन संवादले हल हुने हो । उच्च कुटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरी संवादका माध्यमबाटै यसको हल खोज्नुपर्छ । तर, अहिले ठीक विपरित देशका विभिन्न स्थानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुत्ला दहन गरिदैछ । यो निकै आपत्तिजनक र गलत कुरा हो । यसले समाधान होइन झन तनाव बढाउन सक्छ ।
आज अमेरिकाले नेपाललाई आतंवादीको क्रिडास्थलकारुपमा व्याख्या गरिरहेको छ । नेपालको चीनसंग सामिप्यता बढे लगत्तै अमेरिकाको यो प्रतिक्रिया आएको हो । अमेरिकाले नेपालप्रतिको ‘पोजिसन’ परिवर्तन गरेको यसबाट थाहा हुन्छ । अब मोदी र सि जिनपिङको पनि पुत्ला दहन गर्दै जाने हो भने उनीहरुको ‘पोजिसन’ पनि परिवर्तन नहोला भन्ने के छ ?
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओली, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरु कुटनीतिकरुपमा कमजोर छन भन्ने कुरा होइन । उहाँहरुमा पूर्ण क्षमता छ, तर आवश्यक तथ्याङ्क र सूचनाको अभाव छ । यसको पर्याप्त गृहकार्य गरी सम्पूर्ण सूचना, तथ्य तथ्याङ्क बटुलेर भारत र चीनसंग उच्चस्तरीय वार्तामार्फत सीमा विवाद हल गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको एक इन्च जमिन पनि कसैलाई लिन दिन हुँदैन ।
जहाँसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक खोसिएको कुरा छ यसमा सतप्रतिशत नेपालको कमजोरी छ । नेपाल आफू यथेष्ट गृहकार्य नगर्ने, आफनो सीमाबारे रत्तिभर पनि चासो नराख्ने अनि अर्काले दादागिरी देखायो भनेर हल्ला गर्ने ? आफनो थैलीको मुख राम्ररी बाँधे अरु कसैलाई दोष दिनु नै पर्दैन ।
अहिलेको बामपन्थी सरकारले विदेश सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सकेन ।
भारत, चीन, युरोपियन, अमेरिका सबैसंगको सम्बन्ध शंकास्पद नै देखियो । चीनको ‘बिआरआई’, र अमेरिकाको ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’ कै विषयमा सरकार अस्पष्ट छ । सबैलाई हुन्छ भन्ने गर्न केही नसक्ने स्थितिबाट सरकार गुज्रिरहेको देखिन्छ । यसले अन्य राष्ट्रसंगको विश्वसनीयता घटाउँछ । वर्तमान सरकार यसमा चुकेको छ ।
‘जस्तो अवस्था भएपनि अहिलेको सरकार र नेकपा पार्टी कम्तिमा तीन वर्ष अझै एकबद्ध भएर हिंड्छन् । यसको अर्थ कांग्रेस लगायत प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुने होइन । कांग्रेसले अभूतपूर्व शक्ति आर्जन गरिरहेको छ ।’ विश्लेषक झाको तर्क छ ।
नेपाल भारत चीन